Trafikana zava-mahadomelina : tsaraina sy gadraina eto ireo maorisianina 3 lahy | NewsMada
Natolotra ny mpitsara mpanao famotorana, tetsy Anosy, omaly, ireo olona 11 (ahitana maorisianina telolahy) voarohirohy sy voasambotra tamin’ilay trafikana zava-mahadomelina, milanja 146 kg mahery, tratra tany Manjakandriana. Nodorana omaly ihany koa ireto zava-mahadomelina ireto.
Anisan’ny niatrika ny fampanoavana koa ireo Malagasy valo tafiditra amin’ity tranga ity, izay nahitana vehivavy dimy. Ireto Maorisianina ireto izay voalaza fa nangatahin’ny tompon’andraikitra maorisianina avy amin’ny Mauritius Revenue Authority (MRA) ny hampodiana ireo telo lahy any Maorisy ka any izy ireo no hotsaraina. Tonga teto an-toerana mihitsy ireo tompon’andraikitra avy any Maorisy. Nanda izany anefa ny fanjakana Malagasy kah atao eto ihany ny fitsarana ary hosazina eto. Toe-javatra azon’ny firenena iray atao ihany izany rehefa misy ny terataniny voarohirohy amin’ny raharaham-pitsarana. Marihina fa maro koa ny Malagasy tratra amin’ny fanondranana rongony any Maorisy, kanefa tsy ampy nampodiana teto izy ireny na iray aza, fa misazy any an-toerana avokoa.
Marihina fa 146,66 kg ny tena lanjan’ny rongony tratra, mitentina 16.468.249. 200 Ariary, raha ny tarehimarika navoakan’ny ladoany. Voararan’ny lalàna tanteraka ny fivarotana ireo karazana zava-mahadomelina ireo sy ny fidorohana azy. Voararan’ny lalàna koa ny fampidirana sy ny famoahana azy eto Madagasikara.
Noho izany, nampiharina ny lalàna ny fandorana azy ireo, rehefa nahazoan-dalana avy amin’ny Fampanaovana, ny ao amin’ny fitsarana izay miaraka amin’ny ladoany, ny polisim-pirenena, ny zandarimaria, ny Bianco, ny CICLD. Nanatrika ny fandorana izany omaly ny vadintany. Ho fanohizana ny atao amin’ity varotra zava-mahadomelina ity, mety hisy ny fifanarahana eo amin’ny ladoany maorisianina sy malagasy.
Nodinganina ny zandary…
Ankilan’izay anefa, somary tezitra ihany ny eo anivon’ny zandarimaria manoloana ity tranga ity satria tokony mbola ho nitohy ny fanadihadiana lalina momba ireo olona sy ireo zava-mahadomelina ireo. Toy ny maika loatra ny avy amin’ny ladoany ny hanapitra ny raharaha. Avy aiza ireo zava-mahadomelina ary hoentina aiza? Iza avy ireo olona tafiditra fa tsy ireo voasambotra ireo ihany akory? Nomarihin’ny zandary fa na ny fomba fanondranana, sy ny fikarakarana ireo zava-mahadomelina aza, tokony ho fantatra tamin’ity indray mitoraka ity. Azon’ny zandary atao ihany koa anefa ny maka indray ny taratasin’ady eny amin’ny fitsarana raha ilaina.
Ireo karazana rongony nodorana :
– méthamphétamine 4.120kg
– héroïne 24.593 kg
– cannabis pressé 81.217kg
– feuilles de cannabis 36.646 kg